U mbiri girazi-Architectural Girazi-Jumbo girazi rekuchengetedza - Yongyu
Isu tiri iyo SGCC & CE inotenderwa mutengesi, zvigadzirwa zvedu zvinosangana nemitemo mikuru yekuvaka girazi zvigadzirwa
Basa Redu: Shandai pamwechete kuti muwane kuhwina-kuhwina, gadzira chiono chakajeka!
Yongyu Girazi, yako yakanakira sarudzo yekuvaka girazi zvigadzirwa kubva kuChina.
Iyo kambani yakavambwa naGavin Pan, uyo akashanda muindasitiri yegirazi kubvira 2006 uye aine makore anopfuura gumi 'ekutengesa kunze kwenyika. Yongyu Girazi ndiyo nhengo yeVendor yeUS Ice Rink Association. Chiono chedu ndechekugovera zvakanakira kufanana kwezvakagadzirwa zvegirazi reChina nevatengi, kupa vatengi mhinduro dzinodhura, uye kuwana win-win inoshanda pamwe nevatengi.
Isu takaita indasitiri yekuvaka girazi uye takashandira vatengi vedu vese kubva kuChina nekune dzimwe nyika. Isu tinowana mhinduro dzemunhu kune zvinodiwa nevatengi, batsira vatengi kuchengetedza mutengo wenguva nemari.
Yakadzika Iron U Profile Girazi / U Channel Girazi Simba ...
Isu tinotora kuzvipira kuendesa yepamusoro-ye-the-mutsara zvigadzirwa kune vatengi vedu kubva kuChina, North America, uye Europe kuitira kuti vakwanise kuwana giredhi repamusoro pezvatiri kuita.
Isu tinopfuurira muhunhu hwezvigadzirwa uye tinotonga zvakadzama nzira dzekugadzira, dzakazvipira mukugadzirwa kwemhando dzese.
Semutungamiri anesimba wegirazi rekugadzira indasitiri, isu tiri kumisa mabhenji ekugadzira matanho muzvikamu zvese zvekutengesa uye zvisiri zvekutengesa. Ndiyo nzira yedu yekupa iwe kukosha kukuru mune yega yega chigadzirwa, kana iwe uchida icho chakagadziriswa kana kwete.